Puntland oo si yaab leh ugu jawaabtay Culimada Soomaaliyeed (AQRI) – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Culimada Somaliyeed, ayaa ka hor timid tartan kubadda Kolayga ah oo gabdho matalaya maamul goboleedyada uga furmay magaalo madaxda Garowe, waxayna ku tilmaameen inay tahay arrin ka hor imaanaysa shareecada Islaamka.
Wadaadada, ayaa sheegay inay qorshahan uu yahay mid aan la aqbali karin islamarkaana lagu fasahaadinayo haweenka iyagoo tallaabadan ku sifeeyay mid ay ka dhalan karto carada EEBBE.
Guddoomiyaha hay’adda Culimada Somaliyeed, Sheekh Bashiir Daahir Salaad, ayaa warbaahinta kula hadlayay magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in sharcigu ogolayn in qof dumar ah oo dharkii asturaada iska dhigtay ay ku cayaarto goob fagaaro ah oo rag joogaan.
Dhinaca kale, Culimada Garowe ayaa iyaguna tartankaas ka horyimid, waxayna ku baaqeen in laga waantoobo.
Balse, Guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Faraweyne ayaa arrintaas si adag uga hadlay, mar uu ka qay galay furitaankii Cayaarahan wuxuuna hadalka culimada kasoo qaaday waxba kama jiraan iyo mid aan loo baahnayn, isagoo culimada ku eedeeyay inaysan ka hadlin falalka xagjiriinta.
“Waxaan aad uga xumahay oo maanta ka dhagaystay Idaacadaha wadaad ka hadlaya Xamar oo ka hadlayay tartanka gabdhaha.. Waxaan leeyahay halkan Puntland baa xukunta, Puntland baana cayaartan dhigtay si amni iyo farxad ah bayna ku dhammaanayaan.. Hadaad ku jirto hotel Jazeera oo aadan meelna uga bixi karin, dalkiina dhibaato kasocoto adeer maad ka hadashid dilka Al Shabaab, Daacish iyo dhibaatada waddanka kasocota intaad ku mashquulayso gabar cayaaraysa,”Ayuu yiri Cumar Faraweyne.
Isagoo sii hadlaya, wuxuu ka digay in tafaaruq la kala galiyo umadda Somaliyeed iyo rajada laga qabo in dib loo midoobo, wuxuuna shacabka ugu baaqay in midnimada laga shaqeeyo.
Arrintan, ayaa timid xilli Culimadu horay ugasoo horjeesatay qoondada dumarka ee Aqallada Barlamanka Somalia iyagoo sheegay inay tahay tallaabo lagu baabi’inayo diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban ee umadda Somaaliyeed.
Previous: DEG DEG: Madaxda Galmudug, K/Galbeed & Hiirshabeele oo safar deg deg ah ku aaday Itoobiya & Sababta
Next: Sawirro: Shariif Xasan oo banaanka is keenay & Sawiradiisa lagu arkay…